China WIK 6800 Kuzvidzora Inotakura Konkrete Masanganiswa Mugadziri uye Mutengesi Wilk
WIK 6800 Kuzvidzora Konkrete Sanganisa
Muenzaniso. WIK6800 (Kubvumirana). Ekisero 10T vhiri kumucheto deceleration kaviri akamedura zambuko
Injini yemhando Yuchai Simba 4108 Kuwedzera Tire. 1670R22.5 Waya yepamusoro-kumanikidza kaviri mutsara
Rated simba 91kw Motokari. Oko axial plunger mota
Dhiraivha fomu Liquid torque inoshandura (danho rinoshanduka kumhanya).) Nzira iyo mvura inopihwa Hydraulic yekunze / / nguva ataure
Gearbox. ZL-280 kupatsanurwa kwekuchinja kutapurirana Fomu chinhu 7600 x 2950 x 3400mm
Gear 4 mu4 inodzokera kuviri yakakwira uye yakaderera kumhanya Hunhu hwekugadzirira 9000kg
WIK Kuzvidzora Yega Konkrete Mixers ine yakakosha tekinoroji patent yekugadzira otomatiki kugadzirwa kwekongiri. Kubva ipapo, hazvichanetse kugadzira uye kutakura kongiri. Vanhu vaviri vanogona kusvika kuburitswa nemakumi mana emamita cubic pazuva.
WIK Kuzvidzora Yega Konkrete Mixers zvakazara otomatiki musanganiswa rori parizvino ndiyo yepamberi chisanganiso rori. Izvo zvinongoda chete vashandi vaviri kuti vashandise mota, mumwe anoona nezve kutyaira mota uye mumwewo ane basa rekupa rubatsiro rubatsiro. Injini yayo inogona kushandiswa pane mazhinji masayiti Mukushanda kwese, tangi inosanganisa inogona kutenderedzwa 270 madigiri yakatwasuka uye inogona kuburitswa pane chero chinzvimbo chemuviri wemota. Zviri kunyanya kuchengetedza basa uye zviri nyore kuburitsa kongiri?
Chinhu chakanyanya kukosha mukuvakwa kwezvivakwa zvepamusoro ikongiri. Icho chigadzirwa chandiri kuda kusuma kwauri nhasi ikongiri musanganiswa rori. Iyo inosanganisa akawanda mabasa uye inogona kutsiva jenareta seti, maLader, masanganisi, matangi, uye vanopfuura vashandi vatanhatu. Mutumbi unouya neyakajeka magetsi masikero, masisitimu emvura jekiseni uye makuru-anokwanisa matangi emvura. Iyi mota inogona kuburitsa anosvika mazana maviri pazuva. Cubic kongiri
Ino yazvino yemumba kongiri musanganiswa rori ine nyowani dhizaini dhizaini. Inogona kuburitsa makumi maviri emamita emamita ekongiri muawa imwe chete. Kuva nemusanganisi wekongiri kwakaenzana nekuva nemutakuri, musanganisi, uye conveyor izvo zvinokwanisa kungoisa zvoga, kusanganisa uye kuburitsa. Vashandi vaviri vanogona kushandisa chaiyo yemagetsi sikero kugadzirira kongiri zvinhu. Inofananidzwa nehunhu hwenhamba, iyo hombe-inokwanisa tangi yemvura inovimbisa otomatiki yekuzadza mvura. Mari inowanikwa paawa yakakwira sezviuru zveyuan, uye ndiro rezinesi inogona kushandiswa kutyaira zvakajairika.
Iyo nyowani yekongiri musanganisi muchina unogona kuburitsa 4 cubic metres yekongiri mumaminetsi gumi nemaviri. Kuve nekongiri musanganiswa rori zvakaenzana nekuva nemutakuri, musanganisi, chekutakura rori uye vanopfuura gumi nevaviri vashandi. Inogona kungoisa yega, kusanganisa, uye kuburitsa. . Zviyero zvemagetsi zvakaringana zvinodzora mhando yekongiri mbishi zvinhu. Iyo otomatiki yemvura jekiseni system uye hombe-inokwana tangi yemvura inogadzira yakanakira mamiriro ekusanganisa kongiri.
Iyo yazvino Concrete Kusanganisa Machines inovhura nguva nyowani yekugadzirwa kwekongiri. Kudyisa otomatiki, otomatiki kuzadza kwemvura, otomatiki kusanganisa uye otomatiki kudzikisa kunogona kuvandudza chiitiko cheguruva pane yekuvaka saiti. Yakasarudzika chirongwa dhizaini, yakapusa uye iri nyore chirongwa chekuita, chaiyo yemagetsi chikero uye hombe inokwanisa mvura tangi, Icho chivimbo chakanaka chekongiri kusanganisa Inogona kuburitsa makumi maviri emamita emamita ekongiri muawa imwe, inova mari, inoshanda uye inyore.
Pashure: WIK 5500 Kuzvidzora Yako Konkrete Sanganisa
Zvadaro: WIK28F Gumbo rinotakura